Obama White House Defense - Online
နေအိမ် » လှုပ်ရှားမှု » Obama White House Defense
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Obama White House Defense
ဖေါ်ပြချက်: သမ္မတအိုဘားမားအပေါငျးတို့သအကြမ်းဖက်သမားများကိုဖကျြဆီးနှင့်အိမ်ဖြူတော်ကယ်ဆယ်ကူညီဖို့ ကျေးဇူးပြု.
A,D key to move left or right.
ကစား: 24,487 tag ကို: obama, obama games, ကာကွယ်ရေးဂိမ်း, ကာကွယ်မှု, defence, White House games
ထိပ်တန်းဂိမ်းအပေါ် Donald Trump
ကို Trump ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတစျသောကွောငျ့ကတော့ဘူးအရေးမပါဘူးအဲဒီအစားသင်တစ်ဦးကို Trump ထောက်ခံသူသို့မဟုတ်မဟုတ်ပါဘူး, အဘယ်သူမျှမကပြောင်းလဲနေတဲ့လည်းရှိ၏။ သူကတရားမျှတပြီးစတုရန်းရရှိခဲ့သည်။ မိမိအအနိုင်ရတဲ့မိန့်ခွန်းတွင်သူကအားလုံးအမေရိကန်တစ်ဦးကိုသမ္မတဖြစ်လိမ့်မယ်ဖော်ပြထားခြင်း
အိုဘားမားငှက်ပျံသေနတ်ပစ်ခြင်း။ သမ္မတအိုဘားမားဟာကမ္ဘာ့သည်မိမိငှက်ပျံသေနတ်ပစ်ခြင်းကျွမ်းကျင်မှုကိုပြသလိုလားနှင့်သင်၏အကူအညီလိုအပ်သည်။ ရည်ရွယ်ထားနှင့်ရမှတ်သင့်ရဲ့လက်နက်တွေအဆင့်မြှင့်တင်ရ။ သင့်ရဲ့ mouse ကိုရိုက်ကူး, ပြန်ဖွင့်ရန်သင်၏လက်နက်နဲ့ R ကိုပြောင်းလဲ 1,2,3,4,5 ထိ။
အိုဘားမား narnia ဂိမ်း
အိုဘားမားဒီဂိမ်းထဲမှာလူအပေါင်းတို့သည်နက်နဲသောနှင့်နက်နဲသောအရာဖြေရှင်းနိုင်ကိုကူညီပါ။ , Narnia ပတ်ပတ်လည်သို့သွားပြီးစောင့်ထိုသို့ပြုမှပစ္စည်းများနှင့်ပရိဘောဂမထိ။ သင်၏ပဌမသဲလွန်စကိုသင် screen ပေါ်မှာမြင်ရပါလိမ့်မယ်ကတ်တစ်ကတ်သည်။ သင့်ရဲ့ mouse ကိုသုံးပါ။
hulk - Avengers ကာကွယ်ရေး
hulk သေစားသေစေသောနှင့်အတူဒီနေရာမှာဖြစ်ပြီးမကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေမှအရေးကြီးသော boxes တွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်သည်။ ရန်သူတို့သည်တပ်များဖို့အားလုံးကိုရှိသွားပြီကျွမ်းကျင်မှုနှင့် streath ကိုသုံးပါ။
အစုလိုက်အပြုံလိုက် mayhem - ဖုတ်ကောင်ကမ္ဘာပျက်
အ Mass Mayhem စီးရီးသစ်သွေးထွက်သံယိုဂိမ်းကဒီမှာပါ! ကမ္ဘာပေါ်တွင်တစ်ဦးသေစေနိုင်သောဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခဲ့ပွီးနောကျ, လူတိုင်း freakin ရုပ်ဆိုးဖုတ်ကောင်သို့လှည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်တဦးတည်းကယ်တင်သောသခင် ... တခါအပေါင်းတို့နှင့်အဘို့အသင်ဤပိုးမွှားကိုဖယ်ရှားပစ်ဖို့ရလိမ့်မည်! သင့်ရဲ့ဘန်ကာ, အဆင့်မြှင့်ကာကွယ်ပါ